Hihaona amin'ireo fiasa vaovao an'ny Gnome 3.32 | Avy amin'ny Linux
Fantaro ireo fiasa vaovao ao amin'ny Gnome 3.32
Aorian'ny fivoarana enim-bolana dia navoaka ny tontolon'ny birao Gnome 3.32. Raha ampitahaina amin'ny kinova teo aloha dia maherin'ny 26 ny fanovana natao, tamin'ny fampiharana izay mpandray anjara 798 nandray anjara.
Ho fanombanana haingana ireo fiasa ao amin'ny Gnome 3.32, Ny fananganana mivantana mivantana mifototra amin'ny openSUSE sy Ubuntu dia nomanina.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Gnome 3.32
1.1 Fanohanana lehibe kokoa
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Gnome 3.32
Miaraka amin'ny famoahana ity kinova Gnome 3.32 vaovao ity Ny fomba fijery ny singa interface, ny biraonao ary ny kisary dia nohavaozina.
Ny famolavolana lohahevitra dia tonga amin'ny endrika maoderina kokoa. Drafitra miloko raikitra - nihanazava kokoa ny loko ary maivana kokoa sy maivana kokoa ny takelaka sy ny bokotra.
Ny endrika maoderina kokoa dia tratra tamin'ny alàlan'ny famirapiratan'ny glitter, manafoana ireo zana-kazo manjelanjelatra ary boribory kely kokoa eo an-jorony.
Ao amin'ny kinova maivana amin'ny lohahevitry ny famolavolana, fa tsy ny bokotra mainty misy fefy eo afovoan'ny hazavana, ny bokotra maivana dia atolotra amin'ny ambadika maizina miaraka amin'ny vokatry ny fandefasana aloka kely.
Ny maody sy kiheba mavitrika dia asongadin'ny alokaloka maizina.
Ao amin'ny Gnome 3.32 dia nesorina ny fampisehoana ny anaran'ny fampiharana izay miasa ao am-baravarankely ankehitriny.
Ny safidin'ny menio lehibe ho an'ny fampiharana Gnome dia aseho miaraka amin'ny menio azo alefa amin'ny alàlan'ny bokotra ao amin'ny lohatenin'ny varavarankely fampiharana.
Ity menio ity dia nanjary iraisan'ny rehetra ary ankoatry ny fiasa voalohany nisy teo aloha, dia ao anatin'izany ny zavatra ho an'ny ankizy izay napetraka teo aloha teo amin'ny menio eran-tany teo amin'ny tontonana ambony.
Ho antony iray hialana amin'ny menio manerantany, ny mpampiasa dia tsy afa-po amin'ity endri-javatra ity, ny asa tsy mety amin'ny rindranasa sasany, ary ny fikorontanan-tsaina noforonina tamin'ny fanasarahana ny menio sy ny fampiharana (tsy ny rehetra no mahita ny takelaka ambony ho toy ny menio ifandraisana sy olona Adinonao matetika fa ny menio dia tsy maintsy tadiavina ao amin'ireo takelaka ambony).
Ny avatar an'ny mpampiasa dia atambatra amin'ny singa rehetra ao amin'ny birao ary voaravaka amin'ny endrika sary boribory.
Raha tsy nifidy avatar ny mpampiasa, dia aseho ho azy ny faribolana miloko misy ny kaonty an'ny mpampiasa.
Fanohanana lehibe kokoa
Azontsika atao koa ny manasongadina fa ity kinova Gnome vaovao ity manampy fanandramana fanandramana amin'ny scaling scaling (ohatra, ianao izao dia afaka mampitombo entana tsy in-2, fa 1,5).
Io fiasa io mamela anao hisafidy ny haben'ny singa mety indrindra amin'ny fampisehoana misy hakitroky pixel avo (HiDPI).
Amin'ny lafiny iray, Ny rafitra angon-drakitra Gnome dia nohatsaraina, Nanatsara be ny taham-bidy izy ireo, nanatsara ny fahombiazan'ny tontonana ambony, ny effets animated ary ny fanodinkodinana ny sary.
Ho an'ny mpitantana ny rakitra Nautilus, fanatsarana ny Desktop Icons no nomanina, izay ahafahanao mamerina ny fahaiza-mametraka sary masina eo amin'ny birao (ny fanohanana amin'ny fampisehoana sy fametrahana rakitra, lahatahiry ary saina misy fitehirizana ivelany eo amin'ny birao dia nesorina tao amin'ny GNOME 3.28).
Ao amin'ny tranokala GNOME (Epiphany), mode automation vaovao natolotra izay mamela ny fandefasana rindranasa tranonkala eo ambany fifehezan'i WebDriver (API ho fanandramana mandeha ho azy ny rindranasa tranonkala ao anaty tranokala).
Nampidirina toe-javatra hifehezana ny fomba famakiana (Reader View), izay tsy misy dikany afa-tsy lahatsoratra misy dikany, ary takona avokoa ny fanaraha-maso, sora-baventy, menus, bara fitetezana ary ireo faritra hafa tsy misy atiny amin'ny pejy.
Ny fanamafisam-peo dia nohavaozina indray, aseho amin'ny endrika mitsangana ary zarazaraina ho vondrona maromaro kokoa.
Ny boaty GNOME dia namela ny fampidirana ny rafitra fanafainganana 3D ho an'ny milina virtoaly, raha mifanentana amin'ny mpampiantrano sy ny vahininy ireo rafitra ireo. Io fampiasa io dia ahafahanao mampitombo ny fahombiazan'ny sary, lalao ary fampiharana video editor natomboka tamin'ny milina virtoaly;
Ny Application Installation Manager (GNOME Software) dia nanatsara ny fiasa miaraka amin'ireo programa izay azo apetraka avy amina loharano maro indray mandeha, ohatra, amin'ny alàlan'ny Flatpak sy ny toeram-pivarotana fizarana mahazatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fantaro ireo fiasa vaovao ao amin'ny Gnome 3.32
Godot 3.1: fanavaozana goavana ny motera sary ho an'ny lalao video
CHIPS Alliance: tetikasa vaovao eo ambanin'ny Linux Foundation ho an'ny chips misokatra